Akụkọ Daniel Salikov na Martech Zone |
Edemede site na Daniel Salikov
Ọ bụrụ mmalite ma ọ bụ azụmaahịa na-ajụkarị, ndị ọchụnta ego niile na-atụ anya iji usoro azụmaahịa dijitalụ gbasaa ahịa ha. Ịre ahịa dijitalụ gụnyere njikarịcha search engine, mgbasa ozi mgbasa ozi mgbasa ozi, ahịa email, wdg. Ịnweta ndị ahịa nwere ike ịnweta na ịnweta nleta ndị ahịa kachasị elu kwa ụbọchị na-adabere n'otú i si azụ ahịa ngwaahịa gị na otú e si agbasa ha. Mgbasa ozi nke ngwaahịa gị dabere na ngalaba mgbasa ozi mgbasa ozi ọha. Ị na-eme ihe omume dị iche iche dị otú ahụ